I-Semalt: Indlela Yokwakha I-Plugin A Functional Wordpress
Kukhona amacala amaningi lapho abantu kudingeka badale i-plugin yabo yokusebenza. Kodwa-ke, ezimbalwa izihloko ze-SEO ngaphandle lapho zichaza ukuthi ungakha kanjani i-Wordpress plugin.
Kulo mhlahlandlela we-SEO ohlinzekwa ngu-Andrew Dyhan, isazi esiholela phambili Semalt , uzofunda ukuthi i-plugin ye-WordPress yiyiphi, kungadingeka ukuthi udale eyodwa, nini ukudala i-plugin yokusebenza nokuthi ungayisebenzisa kanjani yenze. Okokuqala, kubalulekile, ukuqala ngokukwazi okwengeziwe mayelana nama-plugins esebenzayo.
ayizinkomba zekhodi ye-PHP, okuvame ukufaka ama-tweaks kanye nokusebenza kuwebhusayithi yakho. Basiza abanikazi bewebhu abaningi bafeze ukusebenza okuningi kumawebhusayithi wabo we-WordPress ngokuthuthukisa uhlelo lokusebenza lwe-plugin ukuze bafeze umsebenzi. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukudala i-plugin engakwazi ukuqondisa kabusha kukhasi elithile noma kunini uma kwenzeka umsebenzi othile. I-plugin iyifayela le-PHP, elisebenza njengefayela eliyihloko noma esinye isici.
I-plugin yokusebenza ingenza ukwandise izici zetimu yakho ye-WordPress. Iyakwenza ukwazi ukuguqula izici ezihlukahlukene zendaba ngaphandle kokuthi uguqule izingxenye zekhodi ebaluleke kakhulu. Ukungahleleki kwe-WordPress yile ndlela ukuthi ungalahlekelwa lezi zinguquko uma ubuyekeza, uguqule noma ushintshe isihloko sakho. Le nqubo ingaba yisisombululo sesikhathi sesikhathi somphumela oyifunayo. Ngaphezu kwalokho, ungaphinde ugcine iskripthi ukuthi siyisebenzise ku-plugin yakho entsha.
Indlela yokudala i-plugin ye-WordPress
Ukudala i-plugin yokusebenza ingenye yemisebenzi ekhululekile kakhulu. Okokuqala, kufanele uqaphele ukudala nokuhlela amafayela we-PHP. Okulandelayo, udinga ukudala i-plugin yakho. Ungakha ifolda bese ufaka ifayela le-PHP kulo. Ukusebenzisa igama elifanayo lefayela nefolda kubalulekile. Okulandelayo, udinga umhleli wakho we-IDE ozithandayo ukuqedela imilingo.
I-plugin ye-WordPress idinga isihloko. Isihloko siyingxenye yokuqala ye-plugin. Iqukethe yonke imininingwane ebalulekile mayelana ne-plugin. Ulwazi lwekhanda lwe-plugin yakho lungabandakanya igama le-plugin, inguqulo ye-plugin nencazelo. Isibonelo sekhanda sizobukeka;
Kubalulekile ukufaka ifayela lokufunda nge-plugin yakho. Lokhu kubizwa ngokuthi ifayela le-readme.txt. Kusuka lapha, ungalayisha futhi usebenze i-plugin yakho.